Govecs GO! T3.6 – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2020
7 केडीई (9.4 एचपी)
80 घण्टा पछि 2%
GO! T3.6 अब उत्पादनमा छैन।
मोडेल Pro Cargo द्वारा बदलिएको हो।
GOVECS GO! T3.6 नवीनतम लिथियम प्रविधिसँग उच्च प्रदर्शन बिजुली कार्गो / डिलिवरी मोटर स्कूटर हो। T3.6 स्कूटरहरू विशेष गरी व्यवसायमा प्रयोग गर्न र व्यापारिकपदार्थहरूको लागि विकास गरीन्छन् र 50 देखि 170 लिटर कार्गो बक्सहरूमा उपलब्ध छन्। स्कूटरसँग 180 किलो (चालकको बाहेक) का कार्गो वजन लिने क्षमता छ। 2017 को लागि नयाँ सुविधाहरू एक नयाँ राज्यको अत्याधुनिक BMZ ब्याट्री हुन् र ब्याट्रि व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) अपडेट गरियो।
Govecs ले ब्याटरीको दायरालाई 2016 को नवीनतम मोडेलमा ग्यारेन्टी दिन्छ। ब्याट्रीहरूसँग पहिलेको मोडेल जस्तै T3.4 जस्तै 45% अधिक दायरा छ। नयाँ अडियोले निरन्तर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ जबसम्म ब्याट्री खाली छ।
T3.6 उन्नत ब्रशलेस उच्च दक्षता बिजुली7केडीई मोटर द्वारा संचालित छ र कम रखरखाव बेल्ट ड्राइव छ। बिजुली स्कूटरमा एक परिष्कृत ड्राइभ रेल छ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि स्कूटर लगभग कुनै शोर उत्पन्न गर्दैन।
स्कूटरको फ्रेम विशेष रूपमा टी सीरीजका लागि डिजाइन गरिएको छ। किनकी विद्युत मोटर को स्कूटर को बीच मा राम्रो तरिकाले राखिएको छ किनकि गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र अत्यंत कम छ, `टी` को महान maneuverability र बेहतर हैंडलिंग संग प्रदान गर्दछ। व्यापक डिजिटल ड्याशबोर्ड प्रदर्शनले तपाईंलाई गति, ब्याट्री भोल्टेज र अन्य जानकारी ’bout जानकारी दिन्छ।
Govecs ले रंगहरूको पूर्ण अनुकूलन प्रदान गर्दछ / स्कूटरको प्रिन्ट (फोटोहरू हेर्नुहोस्)।
स्कूटरको शीर्ष गति 83 कि.मी. / घन्टा छ।
2020 Govecs मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै Govecs स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: